Ukubhukisha mahala kwiKhomishini kuShishino loLawulo lwePropathi
Iimbonakalo » Ukubhukisha mahala kwiKhomishini
Ukubhukisha mahala kwiKhomishini
Thatha ukubhukisha kwii-OTAs kunye nendawo yakho yokubhukisha ngqo ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini kwiZeevou.
Mhle kakhulu nawuphi na umboneleli wokubuk 'iindwendwe phaya-nokuba yihotele, indlu yeendwendwe, indawo yokulala kunye nesidlo sakusasa, okanye indawo enabantu abaninzi yokurenta iholide okanye yokuhlala enendawo yokuhlala, uhlala uzama ukuphucula amanqanaba abo okuhlala. Enye yeendlela ezikhawulezayo zokwenza njalo kukusasaza uluhlu lwazo kusetyenziswa ii-OTAs zomntu wesithathu kunye nokudweliswa kweziza.
Ukugcina amaxabiso kunye nokufumaneka kokuvumelanisa kunye nokuzenzekelayo ukubuyisa ukubhukisha, a umphathi wejelo inokuza kakhulu. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi, abaphathi bezitishi baya kubiza ipesenti yexabiso lokubhukisha ngaphezulu kwento ehlawuliswa ngummeli. Oku kugqiba ngokuchasene nenjongo yoqobo ekusasazeni kula majelo, oko kukuthi, ukuzama ukwandisa amanqanaba enzuzo ngokutya kumvuzo womamkeli.
Inokunceda njani iKhomishini kaZeevou yokuBhukisha Simahla?
E-Zeevou siyayiqonda imizabalazo yemihla ngemihla yamashishini wokubuka iindwendwe, kwaye ke siye sahlawula uninzi lwethu Xabiso ulwakhiwo. Emva kokuqokelela ingxelo evela kubabuki zindwendwe abaninzi, sigqibe kwelokuba sibize intlawulo ethe tyaba kuluhlu ngalunye, eyehla njengoko inani lodweliso lonyuka.
Oku kuthetha ukuba iZeevou ayihlawulisi nayiphi na imali eyongezelelweyo okanye iikhomishini zokubhukisha ezihamba ngomphathi wesiteshi sayo. Njengombuki zindwendwe uya kuba nakho ukonwabela umvuzo opheleleyo ongezelelweyo onokuwenza ngokuvumelanisa ngaphezulu Iifayile ze200 ngeZeevou.
Ngaphezulu, iZeevou's iiwebhusayithi zokubhukisha ngokuthe ngqo yiza simahla. Oko kuthetha ukuba akukho ndleko zokumisela, akukho zindleko ziqhubekayo, kwaye akukho khomishini okanye iifizi zokubhukisha ezenziwe ngabo. Njengebhonasi, ii-Zeevou Partner Host zingasasaza simahla ngaphandle Zeevou ngqo.